သဒ္ဓါလှိုင်း: အစစ်လား အတုအယောင်လား
လောကဝန်းကျင်အတွင်းတွင် မည်သည့်အရာက အစစ်လား၊ မည်သည့်အရာက အယောင်ဆောင်ထားသောအစစ် (အတုအယောင်) ဟု ထင်ရသည့်အရာလား ဆိုသည်မှာ ဝေခွဲမရနိုင်ခဲ့ပါ။ ထိုအရာကပင် ကျမစိတ်ကို စိန်ခေါ်နေသော အရာဖြစ်ခဲ့သည်ဟု သိလာရပါသည်။ မည်မျှပင် ကျမကို စိန်ခေါ်နေပါစေ ကျမ၏စိတ် မယိမ်းမယိုင်ပဲ မည်မျှကာလထိ ရပ်တည်ထားနိုင်ပါ့မလဲ ဆိုသည်ကိုလည်း ကျမ၏ရှေ့ဆက်ရမည့်ခရီးကို ကြိုတင်မမြင်ရသည့်အတွက် ကျမမသိနိုင်ခဲ့ပါ။ ကျိန်းသေသည်မှာ လူတစ်ယောက်၏ စိတ်အခြေခံသည် အမှန်တကယ် စစ်မှန်ခြင်း၊ အယောင်ဆောင်ထားသော အစစ်ဖြစ်ခြင်း ဆိုသည်ကိုပင် ကျမစိတ်တွင် ကိန်းအောင်းမနေခဲ့ပါ။
အထူးသဖြင့် လူသားများ၏ အတွင်းစိတ်သဏ္ဍာန်ထဲတွင် ရှိနေမည့် သဘောထားများ၊ တုံ့ပြန်လာမှုများကို အစစ်အတုဟု ခွဲခြားရလောက်အောင် ကျမစိတ်တွင် ယုံမှားသံသယ ရှိမနေခဲ့ပါ။ မျက်စိနှင့်မြင်နိုင်စွမ်းရှိမည့် အရာများကို အစစ်လား၊ အယောင်ဆောင်ထားသော အစစ်လား ဆိုသည်ကို တိုင်းတာရန် လွယ်ကူနိုင်သော်လည်း စိတ်၏ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုကိုဖြင့် အစစ်လား၊ အယောင်ဆောင်ထားသော အစစ်လားဆိုသည်ကို ဘယ်သောအခါမှ သံသယဖြင့် မထင်မှတ်ခဲ့ပါ။ ဒါကိုပင် ကျမကို အယုံလွယ်သူဟု သတ်မှတ်လျှင်လည်း ခံယူရပါမည်။
အယောင်ဆောင်ထားသော အစစ်ဆိုသည်မှာလည်း အစစ်အတိုင်းကဲ့သို့ပင် ပုံရိပ်တည်ရှိနေပြီး တချို့အရာများမှာ အစစ်ထက်ပင် ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးသယောင်. စစ်မှန်သော သဘောထားရှိသူထက်ပင် ပို၍ စိတ်ထားစစ်စစ် ရှိသယောင် ရှိနေတတ်သည်ကို တွေ့လာရပါသည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုကို လွန်မြောက်မှသာလျှင် ထိုအယောင်ဆောင်ထားသော အစစ်ဆိုသည်မှာ ပုံရိပ်ယောင်တစ်ခု ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ ထိုသူတို့သည် ကြာရှည် အယောင်ဆောင် မထားနိုင်သော သူများဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ရှိစေ အယောင်ဆောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ မည်သည့်အတိုင်းအတာ၊ အချိန်မည်မျှကြာ အထိ ထိန်းထားနိုင်ပါမည်လဲ ဆိုသည်ကိုလည်း ကျမ သိချင်ခဲ့ပါသည်။ သေချာသည်ကတော့ အသက်ရှင်နေထိုင်နေစဉ် ကာလတစ်ခုပတ်လုံး အယောင်ဆောင်ခြင်းကို ထိန်းထားနိုင်ကြသည်လား။ သို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ခေတ္တ အယောင်ဆောင်ထားရခြင်းလား. အခြေအနေတစ်ခုအတွက်လား. ကိုယ်ကျိုးအတွက်လား. သူတပါး၏ စိတ်ချမ်းမြေ့စေမှုအတွက် ဆိုသည့် ယောင်ချာချာ စိတ်ကူးအတွက်လား. ဆိုသည့် အကြောင်းများကြောင့်လားဟု ကျမတွေးမိခဲ့ပါသည်။ အချို့အတွက်မူ အယောင်ဆောင်ခြင်း အတုအယောင် ဆိုသည်ကိုပင် အစစ်ဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာ ယူဆသွားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။
အချို့သူများကမူ ဆက်ဆံရသည့် တဘက်သား၏ ပြုမူပုံအရ အယောင်ဆောင်ထားသော စိတ်အတုဖြင့် တန်ပြန်ခဲ့ကြပေသည်။ ထိုသို့သော ဆက်ဆံမှုမျိုးသည် ဘဝတခုအတွက် နေထိုင်ရမည့် အချိန်ကာလတွင် ယုံကြည်မှု ဆိတ်သုဉ်းပြီး စစ်မှန်သော တန်ဖိုးရှိမည့် စိတ်ထားတစ်ခု ဖြစ်လာမည် မဟုတ်တော့ပေ။ ဆက်ဆံရေးကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ လူမှုတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ယုံကြည်မှုရရန် စစ်မှန်သော စိတ်အစစ်ဖြင့် ဦးစွာတည်ဆောက်ရပေသည်။ ဆက်ဆံမှု အစမပျိုးခင်မှာပင် အယောင်ဆောင်ထားသော စိတ်အတုများဖြင့် ဖြစ်စေ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဆက်ဆံမည်ဆိုလျှင် ဘယ်သောအခါမှ စစ်မှန်သော အရာတစ်ခုကို ရလာမည်မဟုတ်ပေ။ ထိုသို့သော စိတ်အတုများဖြင့် နေထိုင်နေသော သူများတွင်လည်း အစစ်လား၊ အယောင်ဆောင်ထားသောအစစ် (အတုအယောင်) လား၊ ဆိုသည်ကိုပင် ခွဲခြား မသိမြင်နိုင်တော့ပဲ သက်ရှိလူသားများ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အစစ်ဟူသော ဝေါဟာရ တစ်ခုအနေဖြင့်ပင် အယောင်ဆောင်ထားသော စိတ်ဖြင့် ခရီးဆက်လျှောက်နေပေလိမ့်မည်။
ပို၍ဆိုးသည်ကား မိမိကိုယ်တိုင် အယောင်ဆောင်ခြင်းပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မိမိ၏စိတ်နှလုံး၊ မိမိ၏အရိပ်၊ မိမိ၏ သစ္စာတရား၊ မိမိ၏မေတ္တာတရားကို အယောင်ဆောင်ထားမိလျှင် မိမိကိုယ်တိုင်ပင် ချေဖျက်ရပေမည်.။ အယောင်ဆောင်ထားသော စိတ်တစ်စုံကြောင့် မိမိမဟုတ်သော အခြားတစ်ယောက်. လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တွင် နာကျင်စရာ၊ ဆုံးရှုံးစရာများ ဖြစ်နိုင်လာလိမ့်မည်။
စိတ်နှလုံး စစ်မှန်မှု နှင့် အတုအယောင်ကို သက်ရှိလူသားများသည် မည်ကဲ့သို့ ပေတံဖြင့် တိုင်းတာကြသနည်း။ မိမိအပေါ်တွင် မိမိလိုလားမည့် အပြုအမူဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံသည်ကို အစစ်အမှန်ဟု ပြောနိုင်ပါမည်လား၊ သို့မဟုတ် မိမိမလိုလားမည့် ထိုသူ၏အတုံ့အပြန်ကိုကြည့်၍ အတုအယောင်ရှိသော စိတ်ဟု ပြောဆိုကြမည်လား။ ကနဦး ပြောဆိုဆက်ဆံနေစဉ်တွင် မိမိ၏စိတ်အတွင်း အမှန်တကယ် လိုလားသည့်စိတ်၊ အမှန်တကယ် မလိုလားသည့်စိတ်၊ အမှန်တကယ် ပြုမူဆက်ဆံလိုသောစိတ်၊ အမှန်တကယ် မဆက်ဆံချင်သောစိတ်၊ အမှန်တကယ် ထားနိုင်သော မေတ္တာတရားစိတ်၊ အမှန်တကယ် မထားနိုင်သော မေတ္တာတရားစိတ်၊ အမှန်တကယ် မထားနိုင်သော အမူအယာရှိခဲ့လျှင်လည်း မထားနိုင်သည့်စိတ်၊ များဖြင့် ဆက်ဆံခဲ့မည်ဆိုလျှင် အစစ်နှင့် အတုအယောင် ကို ခွဲခြားနိုင်ပေမည်။ မိမိ၏စိတ်တွင် ထင်ဟပ်လာသည့်စိတ်. မိမိ၏စိတ်အရင်းခံဖြင့်သာ တုံပြန်ပြောဆိုသင့်ပေသည်။ သို့မဟုတ်ပါက တဘက်လူသား၏ စိတ်တွင် မိမိပြောဆိုဆက်ဆံနေသည့် စိတ်ကို အစစ်ဟုသာ ထင်နေခဲ့ပြီး အချိန်ကာလ တစ်ခုကို ရောက်ခဲ့၍ မိမိပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့သော စိတ်သည် အစစ်အမှန်မဟုတ်ပဲ တဘက်သားအပေါ် အတုအယောင်စိတ် ဖြစ်နေခဲ့သည်ကို သိရှိခံစားခဲ့လျှင် အတိုင်းအဆမရှိ ဝမ်းနည်းကြေကွဲ နာကျင်ရလိမ့်မည်။ ထိုသို့ ဝမ်းနည်းနာကျင်မှုမျိုးကို မိမိမခံစားချင်သလို မိမိမဟုတ်သော သူတပါးကိုလည်း မခံစားရစေရန် မိမိကပင် နေထိုင်ဆက်ဆံတတ်ရန် အထူးလိုအပ်လှပေသည်။ မိမိ၏ စိတ်ရင်းစိတ်မှန် စိတ်အစစ်ဖြင့် တပါးသူ၏ စိတ်နှလုံးကို တန်ဖိုးထားရပေမည်။
အယောင်ဆောင်ထားသောစိတ်ဖြင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မတုံ့ပြန်မိစေရန်၊ အတုအယောင်စိတ်ဖြင့် မပြုမူ မဆက်ဆံမိစေရန်၊ မိမိကိုယ်တိုင် သတိပေးရင်း စစ်မှန်သော စာနာမှုများ ပြည့်နှက်နေသော စိတ်တစ်စုံဖြင့် စိတ်ရင်းအမှန်အတိုင်း မပြောင်းမလဲသော စိတ်အစစ်များကို ပိုက်ထွေး၍ လောကဝန်းကျင်တွင် အလှဆင် ပြုမူနိုင်ကြရန် ဤစာစုလေးဖြင့် ဆန္ဒပြုရည်မှန်းပါသည်။။။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:11 PM
အတုဆိုတာရေရှည်မခံဘူး အစစ်ကတော့ ဘာမဆိုရေရှည်ခံ
မို့ပါ ----(မိမိ၏စိတ်အရင်းခံဖြင့်သာ တုံပြန်ပြောဆိုသင့်ပေသည်)
jas လဲ အဲလိုပဲပြောဆိုတော့လူတွေကမကြိုက်ကြဘူး
ဒါပေမယ့်လဲပြင်မရဘူး ---- အဲလိုပဲပြောတတ်လို့ပါ
မပြောင်းမလဲသော စိတ်အစစ်ဖြင့် jasmine
အတု အစစ်ဆိုတာကို ခေါင်းထဲမထည့်ချင်တော့ပါဘူး.
တန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုစ့်လေး ဖတ်သွားတယ် မမရေ..
အတုအစစ်တွေက နေရာတိုင်း အလွှာတိုင်းမှာ ရှိနေတတ်တယ်။ အတုအစစ်ခွဲဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အတုဖြစ်ဖြစ် အစစ်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခမပေးဘူးဆိုရင်တော့ အကောင်းသဘောနဲ့ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဆရာမ ပို့စ်အသစ်တွေမရေးလို့ မျှော်နေတာ။ ခု ရေးလိုက်တော့လည်း ဘ၀င်ကျသွားရတယ်။ မကြာမကြာ ဒီလို အတွေး အမြင်ဆောင်းပါးလေးတွေရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
တွေးစရာလေးတွေ ယူပြီး ပြန်သွားပါတယ် အမရေ... အင်းး
လူသားအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်း ဟန်ဆောင်မှုကင်းကြဘို့ဆိုတာ လူ့ဘောင်လောကကြီးမှာ ရာနှုန်းပြည့်ရဘို့ ခက်ပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်စစ်မှန်အောင် ကြိုးစားနိုင်စွမ်းတော့ရှိတာပေါ့ သဒ္ဓါရယ်။
စစ်စစ်...စစ်စစ် ...နဲ့မြည်နေလွန်းလို့ 
အစစ်တွေတောင် လိုက်တုနေရတဲ့ အဖြစ်တဲ့လေ...
ပညာဖြင့်နှိုင်းဆနိုင်မှ တန်ကာကျတဲ့ လူ့လောကမှာ မိမိကိုယ်တိုင် အစစ် ( အမှန် ) ဆီသို့ ရောက်အောင်သွားနေရမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ...
အတုနဲ့ အစ်ဆိုတာ ခွဲခြားနိုင်ဖို့မလွယ်ကူပေမယ့် ကိုယ်ကအစစ်ပေးရင် အစစ်ရနိုင်ပါတယ်။ တရားမျှတတဲ့ လောကကြီးမှာ တန်ပြန်တက်တဲ့ သဘောတရားလေးတော့ရှိပါတယ်။